Cala Macarella, mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan Menorca | Wararka Safarka
Luis Martinez | | Menorca, Xeebaha
Cala Macarella waa mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan Jasiiradda Menorca. Waxay ku taal qaybta koonfur-galbeed, aadna ugu dhow magaalada quruxda badan ee Qalcadda, caasimada qadiimiga ah ee jasiiradda, sanad walba waxay qaabishaa kumanaan dalxiisayaal ah oo doonaya in lagu sawiro.
Sida haddii rafcaanka xiisaha yar ee qaabeeya gidaarada dhagaxa nuuradda ah iyo ku dhowaad bikro uusan ku filneyn, agtiisa ayaad leedahay Cala Macarelleta, xitaa cabirro yar yar oo ku habboon ku dhaqanka qaawanaanta. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato Cala Macarella, waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad sii wadato akhriska.
1 Cala Macarella waa sidee?
1.1 Godadka biyaha hoostooda
2 Sida loo tago Cala Macarella
3 Hareeraha Cala Macarella
Cala Macarella waa sidee?
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan kuu tilmaamno adiga oo ku saabsan Cala Macarella waa inay leedahay runtii wax aan fiicnayn. Ciideeda cad iyo biyaha buluugga ah ee turquoise ayaa ku soo jiidan doona. Sidoo kale waa meel cidlo ah oo lagu ilaaliyo buuraha yaryar ee dhagaxa adag, sidaan kuu sheegnay, ee ay ku samaysmeen cuevas in, ilaa waqtiyadii hore, loo adeegsaday gabbaad ahaan in lagu nasto dhamaadka usbuuca.
Qeybteeda hore, waxaad ku leedahay caleen Kaymaha geedaha ee gaara xeebta lafteeda iyo muuqaal xiise leh oo ah dunes. In kasta oo ay tahay meel fog, haddana xagaaga xeebtu waa dad badan. Waxaa jira safarro aad u yar oo taga jasiiradda Menorca oo aan soo booqan. Qof kastaa wuxuu rabaa, ugu yaraan, inuu u tago iyada si loogu sawiro meel sidan u qurux badan.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay bar xeeb aad u ballaadhan oo aad wax ku cuni karto ka hor intaadan ku laaban xeebta. Waxaas oo dhan, waxaa laga yaabaa inay fiicnaan lahayd haddii aad aaddo Cala Macarella primavera ama dayrta hore si aad ugu raaxaysato xasilooni badan.
Godadka biyaha hoostooda
Cove-kan quruxda badan ayaa sidoo kale leh godad biyo hoostiisa oo aad u qurux badan oo aad booqan karto intaad ku tababaraneyso snorkel. Si aad u hesho, waa inaad ka dabbaashaa aagga bacaadka ah ee ku xigta cidhifka bidix. Qiyaastii boqol iyo konton mitir, waxaad ka heli doontaa godadkan. Iyagu waa miraha dabiiciga karst oo ah dhagaxa ka kooban gidaarada dhinacyada ee isku xira xeebta sidoo kalena ka saraysa heerka badda, sidaan horay u sharaxnay.
Si kastaba ha noqotee, dabaqyada badda ee Cala Macarella ayaan si gaar ah u soo jiidan. Waxay yihiin carro badan oo aan hodan ku ahayn dhirta iyo xayawaanka. Waxaad si dhib leh u arki doontaa noocyada algae qaarkood, qaar ka mid ah kalluunka iyo isbuunyo iyo, in yar oo nasiib ah, tapaculo (kalluun la mid ah midka kalluunka ah) oo lagu dhex qariyey bacaadka hoose.
Sida loo tago Cala Macarella
Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha soo jiidashada leh ee xeebtaan yar ayaa la xiriirta sida loo tago. Waad ku sameyn kartaa wado ahaan, laakiin kama hadlayno taas, laakiin waxaan ka hadlaynaa waddada socodka quruxda badan: the Camí de Cavals.
Jidka ku hareeraysan jasiiradda Menorca oo dhan waxaa lagu yaqaan magacan tan iyo qarniyadii dhexe, markii boqorka James II Wuxuu soo saaray sharci ku waajibinaya Menorcans inay yeeshaan faras ay jasiiradda uga difaacaan weerarada burcad-badeedda.
Xilligan, wadadan quruxda badan, ee ku siisa muuqaalka cajiibka ah, waa la dhaqanceliyaa oo waxaa loo qaybiyaa marxalado. Midkood, midka mideeya bakhaarada Turqueta iyo Galdana, wuxuu maraa Cala Macarella. Ka dib saacad markaad lugeyneyso kaymaha iyo dooxooyinka ku siiya aragtiyo qurux badan, waxaad imaan doontaa Macarella. Wax yar ka hor, haddii aad midig u leexato, sidoo kale waad booqan kartaa Cala Macarelleta.
Camí de Cavalls oo u dhow Cala Macarella
Dhanka kale, maadaama aad qaadatay Camí de Cavalls oo haddii aad isku aragto xoog, waad u raaci kartaa Cala Galdana, Yaab kale oo ku saabsan dabeecadda Menorcan, adigoo sii maraya dhowr aragtiyood oo ku siinaya muuqaallo aan la barbardhigi karin.
Si kastaba ha noqotee, sidaan soo sheegnay, waxaad sidoo kale ku imaan kartaa Macarella adoo adeegsanaya waddo weyn. Xeebtan waxaa ka socda basas Qalcadda. Laakiin, haddii aad doorbideysid inaad ku sameyso gaarigaaga, waa inaad qaaddaa waddada loo maro xeebaha koonfureed, jihada loo socdo Saint John ee Mass. Ka dib markii loo weeciyay Turquoise CoveWaxaad imaan doontaa goob gawaarida la dhigto, taas oo lacag la bixiyo oo qiyaastii shan iyo toban daqiiqo u jirta Macarella.
Hareeraha Cala Macarella
Dhameystirka ugu fiican ee booqashadaada xeebtaan waa magaalada Qalcadda, waxaan shaki kujirin kan ugu taariikhiga ah Menorca. Maaha wax aan jirin, waxay caasimad u ahayd ilaa 1714, markii Ingiriisku qabsaday. Hada caasimada waa Mahon, laakiin taalooyinka waaweyni waxay ku yaalliin Ciudadela.
Malaha waxa ugu quruxda badan magaalada waa iyada magaalada jir, oo lagu sameeyay jidad cidhiidhi ah oo leh magacyo gaar ah (tusaale ahaan, «Que no pasa») oo ku soo urura cathedral ee santa maria. Tani waa qurux qaab dhismeedka reer Catalan ee Gothic oo la dhisay qarnigii XNUMXaad kaas oo ah Macbadka Nafta, oo la sameeyay siddeed iyo tobnaad ee ka dambeysa buugaagta Baroque.
Xarunta taariikhiga ah ee Ciudadela waxaad ku leedahay qodobo kale oo xiiso leh. Tusaale ahaan, ka Barxad ku dhalatay, halkaas oo aad ku arki doontid wax qarka u saaran oo lagu xuso guushii laga gaadhay maraakiibtii Turkiga ee uu amray Admiral Pialí sanadkii 1558. Waxaad sidoo kale booqan kartaa kiniisadda San Agustín, laga bilaabo qarnigii XNUMXaad iyo gudaha oo aad ka heli doontid madxaf diyoosaan xiise leh. Tan, marka lagu daro dahabka dahabiga, wuxuu leeyahay qaybo ka mid ah awoowayaasha dhaqanka talayotiga, lagu horumariyey Jasiiradaha Balearic xilliyada Maarta iyo Birta.
Qodob kale oo soo jiidasho leh oo Ciudadela ah ayaa ah puerto, halkaas oo aad ka arki karto ifafaalaha xiisaha leh risiqa. Xaaladaha jawiga qaarkood, baddu way kacdaa wayna soo dhacdaa ilaa ay ka buuxdo. Waad ku qanci doontaa inaad aragto sida ay maraakiibtu ugu dhaqaaqayaan rabitaanka badda.
Socodku wuxuu kuu kaxeeyaa adiga qalcaddii San Nicolás, oo la dhisay qarnigii XNUMX-aad si looga difaaco magaalada weerarada cadowga. Iyo dhismayaasha kale ee xiisaha leh ee Ciudadela sol el Qasriga Torresaura, kaas oo ka jawaabaya 'Levantine Gothic' iyo Hoolka Magaalada, oo lagu dhisay qalcad duug ah.
Dhinaca kale, wadada ka baxda Ciudadela ilaa Mahón, waxaad ka heli doontaa dhismahan aaska ee sida saxda ah u leh Dhaqanka Talayotiga wixii aan ka soo hadalnay. Waxaa ka maqan dhagax qaybtiisa sare. Iyo, haddii aan u hoggaansameyno halyeeyga, tani waxay leedahay sharraxaad xiiso leh.
Laba qof oo waaweyn ayaa ku tartamayay jacaylka gabadha. Si loo go'aansado midkee u qalma inuu guursado, mid baa ballan qaaday inuu qodan doono ilaa uu biyo ka helayo, halka kan kalena uu dhisi doono markab dhagax ah. Markuu kan dambe qaadanayay kan ugu dambeeya si uu u dhammeeyo dhismihiisa, wuxuu maqlay sida midka kale u qaylinayo ee ah inuu helay biyaha. Ka dib, kii hore, oo laga adkaaday oo xanaaqsan, wuxuu tuuray dhagaxii u waday godka, isagoo dilay ninkii la tartamayay. Isaga oo ka baqay ayuu cararay oo midkoodna ma guursan gabadha.
Gabagabadii, Cala Macarella Waa mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan gudaha Menorca labiskeeda ciidda cad iyo biyaha buluugga ah ee buluugga ah iyo hareeraheeda cajiibka ah. Horay u soco oo booqo. Kama qoomameyn doontid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Menorca » Cala Macarella
Waa sidee lacagaha laga qaado Boortaqiiska